arcorarobinet - Buyzụta ego ego pọmpụ n'ịntanetị
Kitchen & athlọ ịsa ahụ foset Ngwa
Arcora Black Single Handle Floor Mounted tubub Jupụta Fosetị na Aka Aka Ya
Arcora bathtub filler valves nwa ...
ARCORA bezin mixers na swivel spout
ARCORA Single lever basin igwekota taịlị swivel spout ...
ARCORA athlọ ịsa ahụ na swivel spout
WOW Gburugburu matte nwa akwa mgbanaka
ARCORA Kitchen Foset Sprayer Heads G1 / 2 Njikọ
AR Kitchen foset isi He ...
ARCORA G1 / 2 Kitchen Foset Sprayer Isi Nchacha Nickel
Arc Kitchen foset Sprayer Head ...
ARCORA G1 / 2 kichin na-agba agba n'isi
ARC Kitchen foset raygba Head ...
ARCORA ụlọ ịsa ahụ foset Efu ...
Ebee ka m nwere ike ịhụ ọkpọ mmiri ịsa ahụ nke kacha mma?
Ikpebi ụdị ọkpọ nri kichin ịzụta bụ ihe gbasara onwe gị. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ nnukwu ọkpọkọ kichin, ọ nweghị ebe ọzọ nwere ike ịdị mma karịa ebe esi kichin Arcora. Anyị na-enye ndị kasị mma mma fosets sitere na site na otu lever fosets dị iche iche thermostatic kichin faucets. Anyị na-ere akwa mmiri kpụ ọkụ n'ọnụ kichin na ọnụ ọnụ ọnụ ka ị nwee ike ịkwalite ọdịdị nke kichin kichin n'emeghị mmefu ego.
Gịnị bụ ego nke dochie a kichin sink foset?
Ọnụ ego iji dochie ma ọ bụ wụnye ọkpọkọ ọhụrụ na kichin kichin gị dabere na ọtụtụ ihe, gụnyere ụgwọ mmiri ọhụrụ na ụgwọ mmiri. Arcora na-enye ọkpọkọ klas nke mbụ na nke ahụ kwa n'ime ego gị. Ugbu a, ị nwere ike iji Arcora rụọ ọrụ kacha mma na akụ na ụba kichin iji mezie kichin gị.
Kedu ọkpọkọ mmiri na-agbagharị ogo 360 na ihe onwunwe thermostatic?
Imirikiti ndị na-agwakọta thermostatic Arcora kichin nwere ogo nrịgo 360. A na-ejikwa bọtịnụ atọ na isi mmiri ịsa ahụ gbanwere ọnọdụ ịgba ma ọ bụ mechie mmiri nwa oge.
Kedu ihe bụ ikike na ọkpọkọ kichin Arcora?
All Arcora kichin fosets abịa na a afọ ise akwụkwọ ikike na a ụbọchị 90 ego azụ nkwa. Obi ike anyị kwesịrị ịkwado gị maka ọnụego ọnụahịa dị mma anyị na-enye gị na taps ndị a.